ShweMinThar: နေဝင်ချိန်မှာ လှပတဲ့ဓါတ်ပုံများရအောင် ဘယ်လိုရိုက်မလဲ
(Landscape photography tips)
Landscape photographer များစွာဟာ နေဝင်ချိန်မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ magic hour လည်းဖြစ်တော့ composition ကောင်းကောင်း၊ ရှုခင်းလှလှလေးနဲ့ဆို နေဝင်ချိန်ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဟာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် လှပနေမှာပါ။ ဒီ post ကတော့ sunset photography လို့ ဦးစားပေးရေးထားတယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်ကတော့ landscape တွေရိုက်ရင် အခြေအနေအားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ့် tips လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
1. မှန်ဘီလူး / ကင်မရာ ကို သေချာသန့်ရှင်းထားပါ
ကျွန်တော်တို့ဟာ တခါတလေ တနေကုန် ဓါတ်ပုံပတ်ရိုက်ပြီး ရလာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် နောက်ထပ်ပုံတွေရိုက်ဖို့အတွက် မှန်ဘီလူးတွေ၊ ကင်မရာတွေမှာ ဖုန်တွေ၊ ရေစက်တွေ၊ အညစ်အကြေးတွေ ကပ်ငြိနေတာကို သတိမမူမိတတ်ကြပါဘူး။ တခြားအချိန်တွေမှာ မသိသာပေမယ့် (နေ့လည်နေ့ခင်းတွေမှာ အေးဆေးရိုက်လို့ရတာမို့ မှန်ဘီလူးမှာ ဖုန်တွေကပ်နေလို့ ပုံထွက်မကောင်းတာ သတိထားမိသွားရင် အသစ် ပြန်ရိုက်လို့ရပါတယ်) နေဝင်ချိန်လို အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့ နေလုံးဟာ မကြာခင် ပင်လယ်ထဲ၊ တောင်စွယ်ထဲ၊ တောအုပ်ထဲ၊ မြေပြင်ထဲကို ဝင်သွားတော့မှာပါ။ သူ့ကို အမိဖမ်းဖို့အတွက် အချိန်က ခဏပဲရမှာမို့ ကိုယ် တကယ်အသေအချာရိုက်တော့မယ့် အချိန်မှာ ကင်မရာက တစ်ခုခုလွဲချော်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် ပုံကောင်းရမယ့် အခွင့်အရေးလက်လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် နောက်တစ်နေ့ ထပ်စောင့်ရမှာပါ။ အဲ့တာမို့ camera, lens တွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ထားပြီး သွားလေရာ air blower လေးနဲ့ lens သန့်ရှင်းတဲ့ အဝတ်စ (microfiber cloth) လေးတော့ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
2. Tripod သုံးပါ
နေဝင်ချိန်ဆိုတာလည်း low light saturation တစ်ခုပါပဲ။ အလင်းတဖြည်းဖြည်း အားနည်းလာတာနဲ့အမျှ ကင်မရာကလည်း အလင်းလုံလုံလောက်လောက်ရအောင် shutter speed ကို ချလာပါလိမ့်မယ်။ slow shutter speed ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ handheld နဲ့ ရိုက်ရလို့ shake ဖြစ်ပြီး ပုံတွေဝါးသွားတာ၊ မပြတ်သားတော့တာ မဖြစ်ရလေအောင် ဖြစ်နိုင်ရင် tripod နဲ့ ရိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပြီးတော့ tripod နဲ့ရိုက်တဲ့အတွက် အားသာချက်အများကြီးရှိတဲ့အထဲက တစ်ခုက ကိုယ်ရိုက်မယ့်အချိန်မတိုင်ခင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာ နေလုံးရောက်မလာသေးခင်ကတည်းက composition လည်း ကြိုချိန်ထားလို့ရပါတယ်။
3. Shutter remote or2second timer သုံးပါ။
Camera ပေါ်က shutter button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ လက်လှုပ်ရှားမူကြောင့် ကင်မရာ မသိမသာလှုပ်ရှားသွားတတ်တာကို ကာကွယ်ဖို့ shutter release cable ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ကင်မရာမှာပါတဲ့2second delay နဲ့ရိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
4. RAW Format နဲ့သာရိုက်ပါ
ဓါတ်ပုံမှာ detail ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါအောင် RAW နဲ့သာရိုက်သင့်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဒါက သိပ်ပြောစရာကိုမလိုတာပါ။ ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ အပျင်းပြေ ဟိုရိုက်ဒီရိုက်လုပ်တဲ့ပုံတွေက လွဲရင် ကိုယ်တကယ် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို RAW နဲ့ပဲ အမြဲရိုက်စေချင်ပါတယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့် landscape ပုံတွေမှာ မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေက ပိုသက်ဝင်လှပပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် wide angle lens တွေသုံးပြီးရိုက်သင့်ပါတယ်။
6. Aperture Priority Mode နဲ့ရိုက်ပါ
Long Exposure မဟုတ်တဲ့ landscape ပုံတွေမှာ shutter speed ထက် aperture (depth of field) က ပိုအဓိက ကျတာမို့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ပုံတွေထွက်လာစေဖို့ရာ (A or Av) ဒါမှမဟုတ် Manual (M) နဲ့ရိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
7. Aperture ကိုနံပါတ်ကြီးကြီးထားရိုက်ပါ
Depth of field များများဝင်အောင် aperture နံပါတ်အကြီးနဲ့သာ ရိုက်သင့်ပါတယ်။ f/11, f/13, f/16, f/18 စသည်ဖြင့်။ တစ်ပုံရိုက်ပြီးသွားရင်လည်း ကျေနပ်မနေပဲ aperture ပြောင်းရိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ exposure setting အမျိုးမျိုးနဲ့ရိုက်ကြည့်ပြီးမှ စိတ်တိုင်းအကျဆုံးပုံကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
8. ISO ကို အနည်းဆုံးမှာထားပါ
Noise မထပဲ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ပုံကောင်းရဖို့ ISO ကိုတတ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံးချရိုက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ညဘက်ရိုက်တဲ့ပုံတွေနဲ့ shutter speed တင်ရိုက်မှ ရမယ့်ပုံတွေကလွဲရင် ISO ကို အနည်းဆုံးမှာထားပြီး ရိုက်လေ့ရှိတာက ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခု ဖြစ်စေမှာပါ။ ISO နည်းနည်းနဲ့ exposure မှန်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။
9. Shutter Speed ကိုလည်း သတိထားကြည့်နေရပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာ aperture priority mode နဲ့ရိုက်နေတာမို့ shutter speed ကို ကင်မရာက auto သတ်မှတ်ပေးနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကလည်းသတိထား ကြည့်နေသင့်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ပြင်ပမှာ အလင်းအားနည်းလာလို့ shutter speed သာ အရမ်းနှေးလာမယ်ဆိုရင် ပုံက ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနည်းလာပြီး long exposure ရိုက်သလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ motion blur တွေဝင်လာပြီး ပုံက ကိုယ်လိုချင်သလို မထွက်လာတော့တာလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ shutter speed အရမ်းနှေးလာပြီဆိုရင် ISO ကို နည်းနည်းစီတင်ပြီးဖြစ်စေ၊ aperture ကို အလင်းများများဖွင့်ပြီး ရိုက်၍ဖြစ်စေ shutter speed ကိုပြန်တင်ရပါမယ်။ ဥပမာ ISO 100 ထားတဲ့အချိန်မှာ shutter speed ဟာ 1/15th ဖြစ်နေမယ်ဆို ISO ကို 200 ထားပြီး shutter speed ကို 1/30th စသဖြင့် ပြန်တင်လို့ရပါတယ်။ aperture ကိုလည်း f/22 လောက်ထားတာကနေ f/16 လောက် ပြန်ချလိုက်တာမျိုးပေ့ါ။ ISO လည်းအရမ်းမများအောင် shutter speed ကိုလည်း သိပ်နှေးမသွားအောင် ဂရုတစိုက်ကြည့်နေပေးရမှာပါ။
10. ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတိုင်း exposure မှန်မှန်ပြန်စစ်ပါ။
နေရောင်ကို မျက်နှာမူပြီးရိုက်နေရတာမို့ တခါတရံ ရွေထားတဲ့ metering မှားနေတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် exposure လွဲနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်စိထဲ လင်းနေတယ်ထင်ရပေမယ့် ဓါတ်ပုံထဲမှာကျ မှောင်နေတာမျိုးမဖြစ်အောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတိုင်း histogram ကို ပြန်ပြန်စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ retouch လုပ်တဲ့အခါ raw ထဲမှာ အရမ်းမှောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေကို ပြန်ဆွဲတင်လိုက်ရရင် noise က အနည်းနဲ့အများပါလာမှာမို့ မူလကတည်းက exposure သင့်တင့်မျှတနေရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
11. Live View ကိုသုံးပြီးရိုက်ပါ
ဓါတ်ပုံရိုက်ချိန်မှာ viewfinder ကနေကြည့်ရိုက်တာထက် live view ဖွင့်ပြီးရိုက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်က viewfinder နေကြည့်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ နေရောင်က တိုက်ရိုက်ထိုးနေတာမို့ မျက်စိကိုထိခိုက်စေတတ်သလို မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီးအလင်းအမှောင်ခွဲခြားမရတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆို မျက်လုံးတွေပြာနေပြီး နောက်ထပ် ဘာမှ ထပ်ကြည့်လို့မရလို့ ခဏနားလိုက်ရတာမျိုး ခဏခဏ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့လို အခြေအနေတွေအတွက်လည်း live view ရှိနေပေးတာပါ။ live view မှာ exposure setting တွေကြည့်ပြီးရိုက်တာကလည်း ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ battery အနည်းငယ်ပိုကုန်တာကလွဲ၍ပေါ့လေ။ ပြီးရင် dslr မှာ viewfinder ကနေကြည့်ရင် optical မို့ အလင်းအမှောင်က အပြင်ကအတိုင်းမြင်နေရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကင်မရာထဲမှာကျ ကိုယ်ထားတဲ့ exposure က မှန်နေလား မှားနေလားကို live view က တိုက်ရိုက်ပြနေတာမို့ live view နဲ့ရိုက်တာက အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။
12. HDR နဲ့လည်းရိုက်ပါ (High Dynamic Range)
Landscape ပုံတွေကို ရိုးရိုးတန်းတန်း ဒီတိုင်းရိုက်တာအပြင် HDR နဲ့လည်းရိုက်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ HDR နဲ့ရိုက်ခြင်းအားဖြင့် ပိုပြီးကြည်လင်တဲ့၊ အရောင်အသွေးပိုစိုတဲ့၊ contrast ပိုကောင်းတဲ့ပုံတွေရဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ သူကတော့ exposure မတူတဲ့ အနည်းဆုံး ဓါတ်ပုံ ၃ ပုံလောက်ရိုက်ပြီး တစ်ပုံတည်းပြန်ထပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် tripod လိုပါတယ်။ HDR ရိုက်မယ်ဆိုရင် tripod ပေါ်တင်ပြီး composition တစ်ခုတည်းကိုပဲ correct exposure နဲ့တစ်ပုံ၊ (-1 or -2 stops) under exposure နဲ့တစ်ပုံ (+1 or +2 stops) over exposure နဲ့တစ်ပုံရိုက်ပြီး blending လုပ်လို့ရတဲ့ software တစ်ခုခုနဲ့ပြန်ပါင်းထပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၃ ပုံမဟုတ်ပဲ ၅ ပုံလောက်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း (-2 > -1 >0<+1 < +2 ) အနေနဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်။ ထူးထူးထွေထွေ မခက်ပါဘူး။ ကင်မရာတိုင်းမှာပါတဲ့ exposure compensation ကိုသုံးပြီးရိုက်ရင် ရနိုင်ပါတယ်။
13. Reflection ပုံတွေလည်း ရိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့က မြစ်၊ချောင်း၊ကန်တွေ၊ ကမ်းခြေတွေ ဒါမှဟုတ် မြို့ပြတွေမှာ ရိုက်နေတယ်ဆိုရင် ရေပြင် (သို့မဟုတ်) တိုက်တာအဆောက်အဦးတွေက မှန်တွေကနေ အလင်းပြန်နေတာကိုလည်း ရိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ရွှေအိုရောင်ကာလာတွေနဲ့ reflection ပုံတွေကလည်း အလွန်ကြည့်ကောင်းတတ်တဲ့ ပုံတွေပါ။
14. ဓါတ်ပုံကောင်းတွေရဖို့ စိတ်ရှည်ဖို့လည်းလိုပါတယ်
နေလည်းဝင်သွားပြီ၊ golden hour, blue hour လည်းကုန်ပြီ၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံလည်းရပြီဆိုတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတာနဲ့ တန်းထမပြန်သွားပါနဲ့ဦး။ အလင်းရောင်ပျောက်ပြီး လုံးဝ ဓါတ်ပုံရိုက်မရတော့ဘူးဆိုမှသာ ပြန်ပါ။ နေဝင်သွားပြီ ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့လက်ကျန်အရောင်တွေနဲ့ ကောင်းကင်မှာ လှပတဲ့အရောင်တွေ၊ အထူးအဆန်းပုံစံလေးတွေ၊ တိမ်တောက်တာမျိုးတွေ ထပ်ပေါ်လာတတ်ပါသေးတယ်။ အဲ့တာဆို ကိုယ့်အတွက် အပိုဆုအနေနဲ့ နောက်ထပ် လှပတဲ့၊ မတူခြားနားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ထပ်ရိုက်နိုင်သေးတာမို့ ချက်ချင်းထပြန်မသွားသေးပဲ လုံးဝမှောင်သွားပြီ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့မရတော့ဘူးဆိုမှသာ ပြန်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ flash မီးတော့ ကြိုယူခဲ့ပေ့ါလေ။
(internet မှာ ဟိုဟို ဒီဒီ လိုက်ဖတ်ရင် သဘောကျမိတဲ့ article တွေထဲက ကျွန်တော် သဘောကျတဲ့၊ နားလည်တဲ့ အချက်တွေကို စုစည်းပြီး tips လေးတွေအနေနဲ့ပြန်ရေးပေးထားတာပါ။
အရင်တုန်းက ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ post တစ်ခုကို အချက်တွေထပ်ဖြည့်ပြီး ပြန်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
မူရင်း - ဓာတ်ပုံပညာလေ့လာရန် Page